Junior Marketing (Mandalay)
Rebbiz Company (CarsrDB)
Mandalay, Mandalay Region, Myanmar (Burma)	NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!
We have been featured in Forbes, Tech In Asia and many other global/national media as one of Myanmar’s well-established technology companies.
Currently, we are expanding our team rapidly and looking foratalented sales and marketing executives to join us.
Rebbiz Co.,Ltd. မှ CarsDB Online ကားရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်း တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အလိုရှိပါသည်။
၁) Junior Marketing (ကျား) ၁ ဦး
ဘွဲ့ရ ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ် ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ရမည်။
Computer အခြေခံ ကျွမ်းကျင်ရမည်။
လစာ – (၁)သိန်းမှ (၂)သိန်းကြား ။အတွေ့အကြုံ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ ညှိနှိုင်းပေးမည်။
အလုပ်ချိန် – ၉နာရီမှ ၅:၃၀နာရီထိ။
ရုံးပိတ်ရက် – စနေ/တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များအတိုင်းဖြစ်သည်။
(မှတ်ချက်။ ။မန္တလေးရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။)
CV Form နှင့်တကွ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်ပြီး တ-၄/၈၁၊ငုပြာလမ်း၊၆၂လမ်းနှင့် ၆၃လမ်းကြား၊ချမ်းမြသာစည်၊မန္တလေးရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ သို့မဟုတ် [email protected] [email protected]�ိုင်ပါသည်။
စုံစမ်းရန် – ၀၉ ၉၆၄၃၀၅၆၃၈၊ ၀၉ ၃၃၁၂၂၁၄၄
To apply: https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk0mhf9
Email to:[email protected] with your CV.
Job Categories: Featured and Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. 562 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ